ONN: Qeerroon Shaambuu Mootummaa Wayyaanee Irratti Bifa Adda Ta’een Fincila Dhoosan. Waxabajjii 14, 2018 – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsONN: Qeerroon Shaambuu Mootummaa Wayyaanee Irratti Bifa Adda Ta’een Fincila Dhoosan. Waxabajjii 14, 2018
Godina Horroo Goduruu Wallaggaa jajjabeewwaan qeerroo oromoo magaalaa shaamboo, qabsoon qeerroon gachaa tureef ammallee gochaa jiru bakka galii isaa hin qaqqabne jechuun bifa adda ta’een magaalaa Shaambuu keessatti fincila akkasn jabaa ta’e geggeessaa kan jiran ta’uu gabaasaan bakka sanaa suuraa fi viidiyoodhaan deggeramee nuuf ergame ni addeessa.
Suuraa Ingiinar Masfin Abbabaa qabatanii magaalicha keessa deddeebi’anii dhaadannoo dhageessisaa kan jiran jajjabeen Shaambuu, haaromsi OPDOn odeessitu kan kijibaa waan ta’eef qabsoon Qeerroon itti du’e, itti hidhame, itti reebamee qaamaa hir’atee fi biyyaa godaansifame ammallee galii isaa hin qaqqabne waan ta’eef qabsoon keenya itti fufa jedhaniiru.
“Nuti Qeerroon kan qabsoo eegalleef Bilisummaa saba keenyaa argamsiisuuf malee, namooni jireenya isaanii fooyyeffachuuf biyya ambaa ba’an tokko tokko midiyaa wayyaaneerratti akka affeeraman qofaaf miti.
Nuti qeerroon qabsoo kan eegalleef falmattoonni mirga uummata oromoo miseensonni ABOf WBO boolla keessatti ukkamfamanii falmitoonni aangoo, nafxenyoonni mirga saba keenyaa sharafuu barbaadan akka hidhaatii ba’anii suuraa ka’aniif miti. Kanaafuu falmaan keenya hanga Bilisummaatti itti fufa” jedhaniiru.
Itti fufuudhaanis “nuti qeerroon kan qabsoo eegalle dhaabonni waggaa 40 oliif qabsoo haqaa oromoof geeggeesseef gegeessaa jiru moggaatti dhiibamee, kanneen waggaa 4 asitti midiyaatiin qabsoo eegalaniifi namoota qabsoo keessaa asiisf achi raafaman ykn dhaabbilee miidiyaa qofaan akka biyyaatti affeeramaniif miti.
Qeerroon qabsoo kan eegale Oromoon hundi biyyasaa keessa akka jiraatuufi dhaaba jaalatuun akka buluuf malee namoonni waggaa 27f dhiiga keenya dhangalaasisaniifi abbumti arge, akkuma kaneen akka Dammaqee Mokonnon magaalaa Roobeeti ittiin maxxansanitti, karadeemaan fedhe akka ittiin dhaadeffamuuf miti.
Qabsoon qeerroo ABOtiin masakama. ABOtiin hunduufne. ABO faana qabsoofna. WBO faana Bilisoomna” jechuun Fincila Xumura Gabrummaa finiinsaa oolaniiru.
Dhaadannoolee Qeerroon magaalaa Shaambuu dhageessisaa keessaa:
1. Haaromsi jedhame sun sobadha;
Godinnis aanaanis waanti haarome
Oduun wal sobuu malee hin jiru.
2. Dangaan oromiyaa haa kabajamu.
3. Oromoon oromiyaa guutuu keessatti Waraanuma mootummaan biyyattii bulchuun ajjeefamaa jira waan ta’eef nurraa haadhabbatu.
4. Hoggantoonni gaaraa haga gadiiti uummata sossobuu haa dhaaban.
5. Hidhamtoonni oromoo kanneen akka Ingiinar Masfin Abbabaa fi kanneen biroo hidhaati haa ba’an.
6. Taargaan shororkeessmaa ABO irraa haa kaafamu.
7. Maqaa ABOtiin ilmaan oromoof falmattoota haqaa xureessuuf ajjeesuun haa dhaabbatu.
8. ABO akka diinatti ilaaluun ammallee iftoominaan hafuu qaba.
9. Hoggantooni biyyittii oromoo ajjeesaa turan Madaaliyaa badhaasuun afee seeratti haa dhiyaatan, kanneen jedhan keessatti argamu. The
Waxab.14/2018 Oromiyaa Lixaa Godina Lixa Wallaggaatti FXG Magaalaa_Mandiitti daran jabaatee
Waxabajjii 14/2018 Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaalaa Shaambootti Sochiin Warraaqsa FXG mormiin sirna faashistii wayyaanee ADWUIfi balaaleffaannaan yakka duguuginsa Sanyii Oromiyaa keessatti gaggeeffama jiruu bifa adda ta’een dhoofame.
Goototni fi falmatootni Oromoo,Qeerroo fi Ummanni aantummaa Ummatasaaniif qaban tokkummaan bahanii sagalee mormii jabaa dhageessifachaa jiru.
-Balaaleffannaa sirna Sobaa fi sossobaa wayyanee itti fufeera!!
-Ajjeechaa fi gochaan duguuggaa sanyii addatti ilmaa Oromoo irratti Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kuni haalduree tokko malee akka dhaabbatu dhaadatan.
– Ilmaan Oromoo ,Baha Oromiyaa Harargee
– Ilmaan Oromoo,Kibbaa Oromiyaa Gujii
– Ilmaan Oromoo,Lixa Oromiyaa Mandii fi Najjoo
-Ilmaan Oromoo,Kibba Oromiyaa Mooyyaleefi
-Ilmaan Oromoo,Giddugala Oromiyaa Giincitti dhumaa jiran kun waan nu ilaallatuuf obboleewwan keenya diinan dhumaa jiran bira ni dhaabbanna.
Oromoon Oromiyaa gara biraa jiru martuu ammaa fi amma lafa jiranii akka ka’an ni dhaamna jechuun dhaamsa uummata Oromoo hundaaf dabarsan.
Qabsoon itti fufa Garboomsaan nikufa!!
Gootota Beegii: Waxabajjii 14, 2018. Suuraan jechoota kuma caalaa dubbata.